नेपाल लाइभ बिहीबार, वैशाख २३, २०७८, १४:४८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधी सभाको अधिवेशनअघि सांसदहरुको कोरोना परीक्षण हुँदैछ। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिन संसद भवन बानेश्वर पुगेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नेपाल लाइभले गरेको संक्षिप्त संवाद:
कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला कुर्सीको लडाइँका लागि कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न आउनुपर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ?
कोरोना विरुद्धको लडाइँ संसारभरिकै लडाइँ हो। मानव जातिमाथि चुनौती बनेर आएको कोरोनाविरुद्ध विश्व एक भएर लड्नुपर्छ। यो लडाइँ सवैको साझा हो। राजनीतिक लडाइँ आ–आफ्नो मुलुकमा चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा सरकार हटाउने र बनाउने खेलभन्दा पनि फरक लडाइँ चलिरहेको छ। अहिलेको संघर्ष भनेको नेपाली जनताले लामो समय गरेको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक हकलगायतका उपलब्धि जोगाउनका लागि हो।
यसलाई समाप्त पार्ने र मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने एउटा ध्रुव छ भने अर्को त्यसलाई जोगाउने। यो प्रतिगमन र अर्को अग्रमनबीचको लडाइँ हो।
नेपालमा प्रतिगमनका खतरा अझै विद्यमान छन्। यसका विरुद्ध प्रगतिशील शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति, संघीयतका पक्षधरहरु, गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुको एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका रुपमा हेर्नुहुँदैन।
यो दुई ध्रुवीय लडाइँमा जसपा पनि दुवै ध्रुवतिर लाग्छ कि एक ठाउँमा उभिन सक्ने अझै ठाउँ छ?
पूरै पार्टी र आधा पार्टीको कुरा होइन, यो विचार र मिसनको लडाइँ हो। मिसनका पक्षमा जो अगाडि बढ्छ, ती एक ठाउँ हुन्छन्। त्यसमा कुनै पार्टी, जाती र वर्गको दायरा हुँदैन। त्यो भन्दा अघि बढ्छ। जो प्रतिगमनका पक्षमा हुन्छन्, मतियार हुन्छन् ती अर्कातिर ध्रुवीकरण हुन्छन्।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिगमन गर्दा कोही जेलमा परे, प्रतिगमनमा विरुद्ध उभिने कोही निर्वासनमा जानुपर्‍यो। जो प्रतिगमनका पक्षमा थिए, राजा महेन्द्रका पक्षमा लागेर मोज गरिरहेका थिए। हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा देखा पर्ने स्वभाविक घटना हुन्छन्। अन्तिम जीत त जनताका पक्षमा हुनेकै हुन्छ।
जनता समाजवादी पार्टीको धार के हो ?
हाम्रो पार्टीमा पनि लोकतन्त्रका पक्षधर र प्रतिगमन विरोधी एकातिर हुन्छन्। त्यसका मतियार अर्कोतिर हुनसक्छन्। एउटा पार्टीमा होइन, पूरै देशभर यस्तै ध्रुवीकरण हुन्छ।
जसपा फुट्छ भन्ने भनिएको छ। फुट्छ?
यत्तिकै आधारमा फुट्दैन। फुटाउनु पनि हुँदैन।
वैशाख २७ गते तपाईंहरु दुईतिरको लाइनमा मत दिन उभिएको देखिएपछि त फुट भनेर बुझिन्छ होला नि?
यी सामान्य घटनाहरु हुन्। हामीले मिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं। गर्छौं।
मत दुईतिर भए पनि पार्टी चाहिँ एउटै रहने हो?
सकेसम्म मत पनि एकातिरै पार्ने कोसिस गर्छौं।
एमाले स्थायी कमिटी बैठक : मिति असार २, सन्देश २०७५ जेठ २ ! नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक असार २ गते बोलाउने तयारी गरिएको छ। गत जेठ २३ गते एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पा... सोमबार, जेठ ३१, २०७८